भारतको बेङ्गलोरबाट २बर्षको नाबालकलाई छोडेर, सुनका गहना लगि श्रीमती फ’रार ….
कार्तिक १०, २०७८ बुधबार 31
धनगडी दर्पण छायाँ – भनिन्छ महिला घरको लक्ष्मी हुन् तर त्यही लक्ष्मीले यस्तो कार्य गरेपछि के हुन्छ ? त्यस्तै भएको यहाँ भारतमा बझाङ घर भएकी एक महिला गहनासहित फरार भएकी छन्। भारतको बेङ्गलोरबाट बस्दै आएकी २३ वर्षीया गिता थापा (खड्का) फरार भएकी हुन्।
गिताको माइत र घर बझाङमै रहेको खुलेको छ। गिता बेङ्गलोरको हुस्सु रोडबाट गत असोज २१ गते २ वर्षीय नाबालक छोडेर फरार भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनका श्रीमान धित खड्काले गिता गहनासहित फरार भएपछि भारतीय प्रशासनमा निवेदन दिएका छन्।
गहना सहित 23 बर्षिया महिला फरार
सुदुरपश्चिम प्रदेश बझाङ जिल्ला खप्तड छान्ना गाउँ पालिका वडा नं ६ पाटादेवल पुजारी गाँउ निवासी बसन्त ब. थापा र पुल्तिसरा थापा कि छोरी र धित खड्का कि धर्मपत्नि गिता_थापा (खड्का) बेङ्गलोर हुस्सु रोड बाट 07/10/2021 गतेका दिन2बर्ष को नाबालक छोडेर फराहर भएकि छिन । उनका श्रीमान धिर बहादुर खड्का डिउटी गएको बेला बैतडि घर बताउने नाम नखुलेको एक दलाल ले आफ्नो श्रीमती भगाएको बताउछन ।
खड्का आफु घर नभएको बेला बेङ्गलोर मा कर्म थलो बनाइ बसेका बैतडिका एक 24 बर्षिया युबक घरमा आउने जाने शंका भएपछि उनले आफ्नो श्रीमती लाइ सम्झाएको बताउछन । आफु घर नभएको बेला श्रीमती गर गहना लिएर फरार भएको र हातमा भएको फोन रुममै स्विचफ गरेर छोडेको बताउछन । खड्काको स_परिवार करिब5बर्ष देखि भारतको बेङ्गलोर हुस्सु रोड मा कर्म थलो बनाइ बस्दै आउनु भएको थियो ,
अचानक बेलुका डिउडि वाट घरपुग्दा बेलुकी घर नआएपछि आफुलाइ चिन्ता बढेको बताउछन । बिदेशको ठाउँमा छोरी मान्छे सम्पर्क विहिन हुदा उनि हारगुहार गर्दै पुलिस प्रशासन मा उजुरी दर्ता गराए तर कतै टुङ्गो लाग्ने स्थिति नभए पछि परिवार सबै सदस्य र माइति पक्ष पनि आत्तिएका छन । छोरी सम्पर्क विहिन हुँदा भारतका सबै संगठन संग माइति र पोइली पक्ष ले निवेदन गर्नुभएको छ । हामी कहाँ यो खबर पाए लगत्तै खोजीको लागि हामि संग सामाजिक संजालमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण आफन्त जन र साथि हरु संग निवेदन गर्नुभएको छ ।
भारत भरि छरिएका बिभिन्न संघ संस्था र संगठन लाइ खोजिका लागि बिनम्र अनुरोध गर्दछु। बहिनि हराएको पिडामा उन दाइ गोलू थापा र श्रीमान खड्का लाइ यदि कहि कतै भेटिन पुगेमा तल दिएका सम्पर्क व्यक्ति वा नजिकै प्रहरी कार्यालय मा बुझाइ सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। सम्पर्क ब्यक्ति हरु नेपालको लागि गोलि थापा बझाङ ख.छा. गा. पा.- 9869664275
Prevधनगढीमा प्रहरी अधिकारीको हत्या : ९ जनालाई जन्मकैदको फैसला
Next“घरको भि’त्ता भ’त्किँदा, पु’रिएर महिलाको मृ’त्यु’
अ,ल्पआ,यूमै अ,स्तायो एउटा ‘चम्किलो तारा’, बिहानै लेखेका थिए यस्तो स्ट्याटस
लुट्न आएकाहरू खाना बनाए, चिया खाए अनि …आराम गरेर हिँडे
माछा मा,र्न कर्णाली पसेका उनीहरु एक्कासी नदीमा बाढी आएपछि दुई रात रूखमा बसेर बाँ,चे
भर्खरै विमान दुर्घटना हुँदा यति धेरै सबै यात्रुको भयो मृत्यु, मनमा माया भए RIP लेखेर मृतकको आफन्त सामु पर्याइदिनुहोला (3595)
13 गतेदेखि कडा लकडाउन गर्ने निर्णय,औषधि बाहेक अन्य सबै पसल बन्द? (811)